🥇 ▷ Street Fighter V waxaa lagala soo bixi karaa si bilaash ah wakhti xaddidan ✅
Street Fighter V waxaa lagala soo bixi karaa si bilaash ah wakhti xaddidan
Ciyaarta caanka ah ee loo yaqaan ‘Capcom Fight Fight: Street Fighter V’, waxaa lagu soo dejisan karaa si bilaash ah wakhti xaddidan inta lagu jiro bisha Ogosto.
Street Fighter wuxuu isu aasaasay inuu yahay dagaalka ugu muhiimsan ee warshadaha ciyaarta fiidiyaha. Oo inkasta oo muranka sii daayay ee ah in Fighter Fighter V uu haysto, dad badan ayaa wali ku raaxeysanaya muuqaalkan fiidiyowga.
Capcom waa ogtahay in kasta oo ay wanaajinayaan gaarsiinta tan iyo maalintii la siiday, haddana waxaa jira kuwa aan weli ku dhicin inay ka ciyaaraan. Sababta oo ah Wuxuu go’aansaday inuu soo bandhigo xayeysiin waqti xaddidan oo u eg mid soo jiidasho leh.
Laga bilaabo maanta, 1-da Ogosto iyo ilaa 11-ka bisha, waxaad kala soo bixi kartaa Street Fighter V bilaash ah. Ma lahaan doonto dhammaan waxa ku jira oo la sii daayay laakiin waad la ciyaari kartaa dhammaan jilayaasha bilawga ah. dheeraad ah in aad fursad u heli doonto inaad la ciyaarto dhamaan jilayaasha xilli ciyaareedkii seddexaad ee ciyaartan.
Xusuusnow in 2019ka EVO la qaban doono laga bilaabo Ogosto 2 ilaa Ogosto 4. Y Si looga faa’iideysto shucuurta uu tartankan keeni doono, dalacsiinkan ayaa la bilaabay maalmahan.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa muhiim ah in la xuso taas Soo-jeedintan kuma koobna oo keliya isticmaaleyaasha PlayStation 4. Sida Waxaa sidoo kale lagala soo bixi karaa si bilaash ah madal Steam. Meeshaad kuheli doontaan isla maalmaha ciyaarta bilaashka ah ee PlayStation 4.
Mar haddii maalinta ugu dambaysa ee maalinta kama dambaysta ahi dhaaftay, ma awoodi doontid inaad marin u hesho nooca tijaabada ah. Marka Haddii aad jeceshahay ciyaarta Capcom oo aad rabto inaad sii wadato ciyaarta xitaa ka dib Ogosto 11, markaa waa inaad soo iibsato.
Inta lagu guda jiro sanadka 2019 EVO, Street Fighter V waxaa weheliya ciyaaro sida Mortal Kombat 11, Super Smash Bros Ultimate, Dragon Ball FighterZ, Tekken 7, BlazBlue: Cross Tag Battle iyo xitaa Samurai Showdown.
Haddii aad rabto Eeg jadwalka dhacdooyinka iyo gabagabada, waxaan kuugu tageynaa halkan bogga ‘EVO’.